Nomophobia (သို့မဟုတ်) မသိမသာကူးစက်ခံနေရတဲ့ ကပ်ဘေး - Hello Sayarwon
Ye Zon Aung မှ ရေးသားသည်။ 06/04/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဆန်းပြားခေတ်မှီလာတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ပိုပိုဆန်းကြယ်တဲ့ ရောဂါတွေလည်း ပေါ်ထွက်လာလို့နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာအမျိုးအစားတွေ ပိုမိုပေါများလာနေပါတယ်။ Claustrophobia (အလုံပိတ်အခန်းတွေကိုကြောက်တတ်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာ) ၊ Ergophobia (အလုပ်လုပ်ရမှာကြောက်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာ) ၊ Didaskalenophobia (ကျောင်းသွားရမှာ၊ ပညာသင်ရမှာကြောက်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာ) စသဖြင့် ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့။
ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေအပြင် ကိုယ်လက်ထဲမှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှကိုင်ထားနေရတဲ့ ဖုန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာလည်းရှိတယ်ဆိုတာကို သိပြီးပြီလား? Nomophobia လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာတစ်မျိုးကို စိတ်ပညာရှင်တွေက ဖော်ထုတ်ထားတာ နှစ်အနည်းငယ်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Nomophobia ဆိုတဲ့ နာမည်လေးက ထူးဆန်းတယ်လို့ ထင်စရာရှိတယ်မဟုတ်လား? သိပ်မထူးဆန်းပါနဲ့ no–mobile-phone phobia ကို အတိုကောက်ရေးထားတာပါ။ ဒီရောဂါကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေတဲ့ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition မှာစတင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့ တရားဝင်ရောဂါတစ်မျိုးအဖြစ် စတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
Nomophobia ရဲ့ တကယ့် ရောဂါအမျိုးအနွယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆေးပညာရှင်တွေအကြားမှာ အငြင်းပွားနေကြဆဲဖြစ်ပါ။ ဒီရောဂါဟာ Anxiety Disorder လား? Lifestyle Disorder လား? Techno-phobia ပုံစံတစ်မျိုးလား? စွဲလမ်းစိတ်လားဆိုတာကို ပညာရှင်တွေအကြား အငြင်းပွားနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်မှာ Nomophobia ဝေဒနာ စတင်လာပြီဆိုရင် ဖုန်းနဲ့ မကင်းကွာအောင် တမင်ဂရုစိုက်နေထိုင်တာမျိုး၊ ဖုန်းမရှိချိန်တွေမှာ စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်တာမျိုးနဲ့ ကိစ္စအားလုံးကို ဖုန်းနဲ့ ဆက်စပ်တွေးခေါ် ပြုမူနေတတ်တာမျိုးတွေ စပြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစကတော့ မသိဘာသာပါပဲ။ နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ့်စိတ်ကိုက တမင် ခုလို ပြုလုပ်မိနေတာကို သတိထားမိလာပါလိမ့်မယ်။
လက်ရှိအချိန်အထိ လေ့လာထားချက်တွေအရ Nomophobia ဝေဒနာခံစားနေရသူတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အာရုံစိုက်မှုလျော့ကျလာတာ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာ အားနည်းချက်တွေ သိသာထင်ရှားစွာ ကျဆင်းလာတာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်။
Nomophobia ဝေဒနာ စွဲကပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ ပုံမှန်ထက် အလုပ်ပြီးမြောက်ချိန် ၂ နာရီလောက်ပိုကြာမြင့်တက်ပြီး အခွင့်အရေးတွေကို မျက်ကွယ်ပြုမှုလည်း ပိုများတတ်ပါတယ်။ Nomophobia ဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ၄၀% ဟာ ပညာရေးမှာ အဆင့်ကောင်းကောင်းမဝင်ကြဘူးလို့လည်း လေ့လာချက်တွေကဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ဖုန်းကို လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးနဲ့ ချိန်ထိုးစဉ်းစားလာတာမျိုးတွေ မြင့်တက်လာတတ်ပြီး Pre-existing anxiety လိုဝေဒနာတွေလည်း ခံစားလာရနိုင်ပါသေးတယ်။
Nomophobia ကပေးတဲ့ ဝေဒနာများ
ဆိုးရွားတဲ့အဆင့်တစ်ခုကို ရောက်လာပြီဆိုရင် စွဲလမ်းမှုပြဿနာသာမက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကိုပါ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ခံစားလာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Nomophobia သမားတွေဟာ အောက်ပါ ဝေဒနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကြောက်ရွံ့၊ ထိတ်လန့်တာတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဖုန်းမသုံးရချိန်၊ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းသုံးရအဆင်မပြေချိန်တွေမှာ ဒီလိုဝေဒနာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဆိုးရွားလှတဲ့ Nomophobia ဟာ ကပ်ဘေးတစ်ခုလို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပျံ့နှံ့နေတယ်လို့ အင်္ဂလန်က စိတ်ရောဂါအထူးကု ပါမောက္ခဆရာဝန် ဂေးလ် ကင်မန်းက ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ လူတိုင်းနီးပါး စမတ်ဖုန်းတွေကို နေ့စဉ်လူနေမှုအသုံးအဆောင်တွေအဖြစ် အသုံးချနေကြတဲ့ဒီခေတ်မှာ ပါမောက္ခ ကင်မန်းရဲ့ ပြောဆိုချက်က မှားယွင်းတယ်လို့ မဆိုသာပါဘူး။
လေ့လာချက်တွေအရလည်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသုံးစွဲသူအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ ဖုန်းတွေအပေါ် စွဲလမ်းစိတ် အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ရှိနေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်ချို့က Nomophobia အဆင့်အထိမရောက်သေးပေမယ့် ရောက်နိုင်ချေရှိနေပြီး တစ်ချို့ကတော့ မသိလိုက်ဘာသာနဲ့ကို စွဲလမ်းတဲ့အဆင့်ကို ရောက်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ကိုယ်က စမတ်ဖုန်းသုံးရတာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဆိုရင် ခုချိန်မှာ သေချာပြန်စဉ်းစားပါ။ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ဖုန်းတကြည့်ကြည့်၊ ကျောင်းမှာလည်း ဆဲလ်ဖီ တဆွဲဆွဲ၊ ရုံးမှာလည်း ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်လေးတ ပွတ်ပွတ်ဖြစ်နေပြီလား? အိပ်ယာဝင်ချိန်မှာတောင် ဖုန်းလေး ဘေးချပြီးမှ အိပ်နေပြီလား? ဒါဆိုရင် ကိုယ့်မှာ Nomophobia ရှိနေပြီလားဆိုတာကို ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ လိုနေပါပြီ။
စမတ်ဖုန်းက လူ့အရေပြားကို ဘယ်လို ဒုက္ခပေးသလဲ
ဖုန်းကို လက်က မချနိုင်ဖြစ်နေပြီလား။